ကားပါမစ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် – Ye Htut's Blog
Posted byye htut January 7, 2020 Posted inGovernment, PoliticsTags:NLD, yehtutarticle
၂၀၁၄ ခုနှစ် ဇွန်လ ၄ ရက်နေ့ မှာ အဲဒီအချိန်က အတိုက်အခံ အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီဥက္ကဌ လည်း ဖြစ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် လည်းဖြစ်တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အစိုးရက ပေးမယ့် ကားပါမစ်၊ မြေကွက် ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပြောကြားခဲ့တယ်-
“ဒီလို ကားပါမစ်တွေ မြေကွက်တွေဘာတွေ ဒီလိုအချိန်မှာလည်း မလိုချင်ပါဘူး၊ အခုပြည်သူအများစုဟာ ဆိုလို့ရှိရင် သူတို့ရဲ့လယ်ယာမြေလေးတွေ ရရှိရေးအတွက် ရုန်းကန်နေရတဲ့ အချိန်မှာ ကျမတို့ပါတီအနေ နဲ့ ဒီလိုမြေကွက်တွေလည်း အလကားမယူချင်ပါဘူး၊ ကားပါမစ်တွေလည်း မလိုပါဘူး” ပုံ (၁)
ပါတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ဟာ အဲဒီအချိန်က အတိုက်အခံပါတီဖြစ်နေတဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီရဲ့ မူဝါဒပဲလို့နားလည်ပါတယ်။ ဒီလို အခွင့်အရေးမယူဘူးဆိုတဲ့ ရပ်တည်ချက် ကလည်း လေးစားစရာကောင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီစကားပြောပြီး ခြောက်နှစ်နီးပါးရှိတဲ့အချိန်မှာတော့ အင်န်အယ်လ်ဒီအစိုးရ ရဲ့ စီးပွားရေး နဲ့ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလ ၂ ရက်နေ့ ရက်စွဲ နဲ့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများနဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများကို ပြည်ပကနေ မော်တော်ယာဉ်တင်သွင်းခွင့် ( ပါမစ် ) ပြုမယ့် ညွှန်ကြားချက်ထွက်လာပါတယ်။ ပုံ (၂)
အလဲဗင်းမီဒီယာသတင်းအရဆိုရင် ဒီကားတင်သွင်းခွင့်တွေဟာ အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်လည်း ရဦး မှာဖြစ်တယ်။ အဲဒီလို အခွန်မဆောင်ဘဲ ဝယ်ခွင့်ရမယ်ဆိုတာသာ မှန်ကန်တယ်ဆိုရင် ဒီမူဝါဒ ဟာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေကို အခွန်ဆောင်ပြီး ကားဝယ်နေရတဲ့၊ အမည်ပြောင်းနေရတဲ့ ပြည်သူတွေထက် ပိုပြီး အခွင့်အရေးပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပုံ (၃)
ဒီနေရာမှာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့အထဲမှာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ သမ္မတ၊ ဒုသမ္မတ၊ ဝန်ကြီး၊ ဒုဝန်ကြီး၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တို့မပါဘူးလို့ အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီထောက်ခံသူတွေ က စောဒကတက်နေတာလည်း တွေ့တယ်။ အဲဒီလူတွေကိုတော့
အဂတိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေ ပုဒ်မ ၃ (င) မှာ
ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုသည်မှာ ခန့်အပ်ခံရသည် ဖြစ်စေ၊ ရွေးချယ်ခံရသည်ဖြစ်စေ ၊ လစာ စရိတ် နှင့် ချီးမြှင့်ငွေရသည်ဖြစ်စေ၊ မရသည်ဖြစ်စေ၊ ဥပဒေပြုရေး၊အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် တရားစီရင်ရေး ဆိုင်ရာ ရာထူးတစ်ခုခုတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်သော အမြဲတမ်း သို့မဟုတ် ယာယီ ဝန်ထမ်း ကို လည်းကောင်း၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း လုပ်ငန်းအပါအဝင် အများပြည်သူ ဆိုင် ရာ လုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်လုပ်ကိုင်နေသူကိုလည်းကောင်း၊ တည်ဆဲ ဥပဒေ တစ်ရပ်ရပ် အရ ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းဟု သတ်မှတ်ထားသူကိုလည်းကောင်း ဆိုသည် လို့ ပြဋ္ဌာန်းထားတာကို လေ့လာပါ လို့ ပဲ ပြောချင်ပါတယ်။ ပုံ (၄)
အဲဒီပြဋ္ဌာန်းချက်အရ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းဆိုတာ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ သမ္မတ တို့ မဆိုထားတဲ့ သတင်းမီဒီယာဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၇ အရ ဆိုရင် သတင်းမီဒီယာကောင်စီဝင်တွေလည်း ပြည် သူ့ ဝန်ထမ်း အဖြစ်အကျုံးဝင်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခါ ဒီစာဟာ အတွင်းဝန်တွေက ထုတ်တာ၊ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ သမ္မတ၊ ဝန်ကြီးတို့ မသိဘူးလို့ ကာကွယ်နေသူတွေလည်း တွေ့တယ်။ ဒီလူတွေကတော့ အစိုးရအဖွဲ့လုပ်ထုံး လုပ်နည်းကို မသိတာလား၊ မျက်စိမှိတ်ကာကွယ်နေတာလားမသိနိုင်ဘူး။
ကားတင်သွင်းခွင့်မူဝါဒ အခွန်ကိစ္စတို့ဆိုတာ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ တရားဝင်တင်ပြပြီး အတည်ပြုချက်ရမှ ဆောင် ရွက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးပါ။ ဒီလို မူဝါဒမျိုးကို အထက်အကြီးအကဲတွေမသိဘဲ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်က ထုတ်ပြန်ဝံ့တယ်ဆိုရင် အထက်အကြီးအကဲတွေဟာ အစိုးရလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကို လုံး၀ မသိ သူတွေဖြစ်မှ၊ ဒါမှမဟုတ် အတွင်းဝန်ဟာ စူပါမင်းလို့ စွမ်းအင်တွေရှိမှပဲဖြစ်မှာပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းနဲ့ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေကို ကားတင်သွင်းခွင့် (ပါမစ်) ပေး တဲ့ကိစ္စကို မကန့်ကွက်ပါဘူး။ အစိုးရတစ်ရပ်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအရ၊ စီးပွားရေးအရ ဘက်ပေါင်းစုံ က တွက်ချက်ပြီး လုပ်သင့်တယ်ထင်ရင် လုပ်ပေါ့။
တစ်ခုပဲ ပွင့်လင်းမြင်သာမှု ၊ တာဝန်ခံမှုတို့ကို အမြဲတမ်းကိုးကားပြောဆိုခဲ့တဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည် နဲ့အင်န်အယ်လ်ဒီပါတီအနေနဲ့ အတိုက်အခံဘဝက မူဝါဒကို အစိုးရ ဖြစ်တဲ့ အချိန် မှာ ဘာ့ကြောင့် ပြောင်းလဲကျင့်သုံးရသလဲဆိုတာကိုပဲ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရှင်းပြစေချင်တာပါ။
မှတ်ချက်။ အာရ်အက်ဖ်အေ သတင်းလင့်ခ်
2 thoughts on “ကားပါမစ်နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်”
Not fair Sir. She always fool to the ppl. Totally different words before and after she grabbed the power. Useless………. and shameless.
ထောက်ပြ ‌ေဝေဖန်မှု့ကို နှစ်သက်ပါ၏။